နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ကျွန်တော်နှင့် မပြီးဆုံးခဲ့သော ပန်းချီကား တစ်ချပ် (၁)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:03 PM
juli March 24, 2009 at 5:39 PM
ကိုဘွိုက် စာရေးကောင်းတယ်..ဝတ္ထုပဲရေးစားပါတော့ ကိုဘရယ်.. ကိုယ်တွေ့လား စာတွေ့လား.. ဆက်ရန်ရောရှိသေးလား.. ဇတ်လမ်းတွဲလား.. ၉၉ ထဲကဆိုတော့.. အဆုံးသတ်က အလွမ်းဇတ်ဖြစ်မှာတော့သေချာပါတယ် :)
juli March 24, 2009 at 5:43 PM
ဟီး( ၁ ) ကိုခုမှမြင်တယ် ဆောဒီး
:P March 24, 2009 at 5:53 PM
အလဲ့.. တယ်ဟုတ်ပါလား... စာရေးလည်းကောင်း......။
၁။ ပွဲခင်းမှာ နောက်လှည့်ကြည့်တော့ ကုလားမကြီး နှာခေါင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ပါး ထိမိသွားသေးလား၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေပါ။
၂။ ဆိုက်ကား ၁စီး ၃ ယောက်စီးတော့ ဘေးခုံက ဘယ်သူထိုင်ပါသနည်း။
Phyo Maw March 24, 2009 at 8:08 PM
ကို boyz ရယ်
အနော်လည်း မုန့်ဟင်းခါးဆို မုန့်ဖက်မထည့်ပဲစားတာပါ...
ချား( ရဟတ်) တော့ ကို boyz တို့လို စီးရကံ မကြုံခဲ့ဘူး။
နာကွင်းလေးနဲ့ ကုလားမလေးလာဆွဲတော့ ရောင်ရမ်းပြီး ရင်ခုန်းသွားတယ်လို့
ကလူသစ် March 24, 2009 at 8:18 PM
မစားရ၀ခမန်း ဒီလိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်ရတာပါပဲလေ :)
khin oo may March 24, 2009 at 10:43 PM
လုပ်ဇတ် ဆိုတော့လည်း ရှေ့နောက်တွေ မညီနိုင်တော့ဘူးပေါ့။
လရောင်ငတ်တဲ့ည (၅) ပျောက်နေတယ်။ အမှန်ကတော့ လရောင် ပျေက်တဲကည (၅) ကိုဆက်ရေးသင့်တယ်။ အဲဒိတော့ ဒီ (၁) သည်လည်း အဆုံးမသတ် နိင်ဘုးလို့ယူဆရမယ်။
PAUK March 24, 2009 at 10:45 PM
khin oo may March 24, 2009 at 10:51 PM
မှန်တယ်။ ကဘွိုက်စ်လူမိုက်ဆိုတာ ကို လက်ခံထားတယ်။
အချစ်ဆိုတာကို သူများတွေ ကစတဲ့ အချိန်မှာ တို့ကတော့မေ့တောင် မေ့နေပါပြီ။ generation ကလည်းကွာတာကိုး။
အင်း ၉၉ ဆိုတော့တို့က စလုံးမှာတောင် ဘာညာ ဘာညာ လုပ်နေပြီ။
အမ်. ဘယ်က ဂွိက ပါလာတာတုံး။
စိတ်ဒါတ်ကျလိုက်တာ. ပွဲ့ စမယ် မကြံသေးဘူး ပျက်ြ့ပီ. ကုလားမကြီး ဝင်လာတာနဲ့။ အဲဒါကြောင့်ပြောတယ်။ ဆက်ရေးမနေပါနဲကတော့ လို့ အတည် ကို ရေးလို့မရဘူး။ ပွဲဖျက်ပစ်လိုက်တာချည်းဘဲ။
အင်း။။ဒါပေမဲ့ မဆိုးပါဘူး. ဇတ် လမ်ဆက်လို့ရသေးတယ။်
အမြင့်ကြောက်တယ်ဆိုလို့ တစ်စုံတစ်ခု များဖြစ်ဦးမလားလို့ ဘာ မှ လဲ မဖြစ်ဘူး။ ဘာ မှ မဖြစ်ရင် အစကတည်းက စကားမခံထားရပါ။
သူက လမင်းကို ငေးကြည့်နေရင် ကိုယ်သာဆိုရင် မ်ြက်ခင်းပေါါ်လှဲအိပ်ပြီး သူ့ကို ကြည့်နေမှာဘဲ။ (လှလိုက်တဲ့ အကွက်ကလေး. ရအောင် လေး မယူတတ်ဘူး)
ဒီလောက်ဘဲလား. အလိုက်တာနော်။ တို့သာ မိန်းကလေး နေရာမှာဆိုရင် စိတ်ဆိုးမှာဘဲ။ ဘာမှ ဘာမှ..မဘာလို့ဆိုပြီး..
ဆိုက်ကားက ဘယ်က ပါလာတာလဲ. ဖီးလ်အောက်လိုက်တာ..မော်တော်ကားလေး ဘာလေးသုံးတာ မဟုတ်ဘးူးး လေ နဲ့ရေးတာ စာမှာတောင် အဖြစ်မရှိဘူး။ လွန်းထားထားတို့ဆိုရင် …
စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာ yes လို့ပြောတာ။ တစ်ခါတည်း ခေါင်းငြိမ့်လို့ဖြစ်ပါ့မလား။ ဒီလောက်မှ မသိရင်..
ဆက်မရေးနဲ့တော့.. ဇတ်ကို မလှအောင် ရေးနေရင်.။